Waa maxay Synthetic THC? • Dawooyinka Inc.eu
Waa maxay Synthetic THC?
Dardaaran cannabinoids, oo sidoo kale loo yaqaan marijuana synthetic, ayaa ah kiimikooyin farsameysan oo lagu farsameeyay shaybaarada si loogu ekeysiiyo saameynta marijuana. Wax soo saarka xashiishadda iyo haramaha si sharci ah loo iibiyay ayaa sidoo kale ku sumoobi kara synthetic THC khatarna ku ah nolosha macaamiisha.
Saamaynta ay leedahay 'THC' synthetic waxay la mid tahay kuwa ka soo baxa sheyga dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farqi aad u muhiim ah: oo ka duwan khudradda, dabiiciga ah marijuana synthetic cannabinoids waxay u horseedi kartaa waxyeelo khatar ah. Doogani waxay u egtahay inay inta badan ka timaado isbahaysiga Bariga iyo Switzerland. Doogga ayaa loogu talagalay CBDalaabooyinka waxaa lagu siiyaa THC synthetic. Iyada oo ay ka dhalan karto khatar caafimaad oo daran taas.
Daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal Dutch ah ayaa umuuqata inay xaqiijinayaan aragtidan halista ah ee synthetic cannabinoids. Daraasadu waxay tijaabisay saameynta synthetic cannabinoids waxayna ogaatay in walxaha firfircoon ay aad uga khatar badan yihiin kuwa ku jira waxyaabaha xashiishka dabiiciga ah.
1 Dhibaatooyinka halista ah ee THC synthetic
2 Xashiish wasakhaysan
Dhibaatooyinka halista ah ee THC synthetic
Daraasadu waxay ogaatay in kaqeybgalayaashu ay leeyihiin garaaca wadnaha oo sareeya ayna si liidata u qabteen xirfadaha mootada iyo qiimeynta garashada. Intaas waxaa sii dheer, kaqeybgalayaashu waxay muujiyeen heerar aad ufara badan oo laxiriira raadinta garashada garashada, jahwareerka, iyo amnesia, waxayna la kulmeen dareen runta iyo aqoonsiga oo yaraaday.
Sababaha tan ayaa ah in inta THC laga helo xashiishka dabiiciga ah ay saameyn ku yeelato isla maskaxda maskaxda, synthetic cannabinoids waxay si xoogan ugu xirmaan qabtayaashan sidaas darteedna waxay keenaan jawaab aad u xoog badan.
Waa muhiim macaamiisha inay ogaadaan waxa ay iibsanayaan. Waxaa jira xashiish wasakhaysan oo wareegaya inta dadku u malaynayaan. Nidaamka Macluumaadka Daroogada ee Dutch-ka iyo Korjoogteynta ayaa falanqeeyay dhowr shay oo haash iyo weed ah oo ku sumoobay synthetic Cannabinoid MDMB-4en-PINACA.
Akhri wax dheeraad ah gemmacert.com (Source, EN)
CBDcilmi baarismukhaadaraadka syntheticTHC
Isticmaalida XTC waa inaysan marnaba caadi ahayn
Sharciyeynta Ecstasy waxay leedahay u doodayaal badan. Laakiin doodoodu miyay ansax tahay? U doodayaasha sharciyeynta ...
Cannabis in Israel: Guddiga Wasiiradda wuxuu dhiirrigeliyaa xakamaynta
Dhamaadka Sebtember, dowladdu waxay rajeyneysaa in reer Israa’iil ay helaan 50 garaam oo xashiishad ah ama 15 abuur ah oo loogu talo galay isticmaalka madaddaalada…
Saddex-xagalka Amsterdam: riyo mise riwaayad?
Netherlands - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH La-talinta Sharciga) (tiirarka KHLA). Jimcihii lasoo dhaafay ayuu duqa magaalada ...
Jawaab ka bixi Ka noqo jawaab
Siyaasadda daroogada: Peter "Regulate" de Vries iyo mudanayaasha baarlamanka oo qabatimay mamnuucista
Sharciga Xashiishka, ma imanayaa mise maya?
Shaquille O'Neal oo dacweeyay Shirkadda Cannabis, waxay doonaysaa in ka badan $1m magdhow ah
Dhaqdhaqaaqa jireed iyo xashiishadda dawada ayaa saameyn isku mid ah leh marka loo eego daraasadda Ingiriiska
Daalibaan si ay u beeraan xashiishadda
Isticmaalka xashiishadda xilliga uurka ayaa lala xiriiriyay dhibaatooyinkan caruurnimo
Shirkadda Mega ee Uber waxay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee suuqa xashiishadda
La Xiriir & Wada shaqeyn